Dawlada Itobiya oo ka Gaabisay in ay Difaacdo Gabalka Ogaden – Rasaasa News
Apr 29, 2010 Dawlada Itobiya oo ka Gaabisay in ay Difaacdo Gabalka Ogaden, Eritrea, ethiopia
Qoomiyada Eritrea oo ka mid ahayd qoomiyadaha Itobiya, ayaa iyadu ka faa,iidaysatay dastuurka magaca ah ee Itobiya. Waxayna si fudud ku heshay in ay gooni isaga taagto Itobiya, ka dib kolkii uu ururka TPLF/EPRDF oo ay wada rideen xukunkii Dergiga ganta isagu ku dhiga xukunka Itobiya iyaga oo gacan ka helaya EPLF/Eritrea.
Ciidamada jabhadii EPLF ayey ahaayeen ciidankii ugu horeeyey ee gaadha dhulka Somalida Ogadeeniya, dagaalkii ugu horeeyeyna la galay ciidankii curdinka ahaa ee ONLF.
Muddo dheer ka dib, waxaa ay colaad dhuleed soo kala dhex gashay labada xukuumadood ee Itobiya iyo Eritrea, waxaana dhex maray dagaal lagu hoobtay sanadkii 1998. Dagaalkaas oo ay ka wada qayb galeen qoomiyadaha Itobiya, ayey qoomiyada Somalidu kaga qayb gashay dad iyo maal badan, kolkii dambana UN-ta ayaa kala dhex gashay labada dal. Dadkii dagaalka ka qayb galay waxay UN-tu ku bixisay lacago loogu talo galay in dib dhaqan celin loogu sameeyo, nasiib daro dadkii dagaalka ka qayb galay ee lagu soo celiyey dhulka Somalida Ogadeeniya xukuumadu wax taakulayn ah ma ayna siinin.
Dagaalkii u dhaxeeyey labada xukuumadood ee ka socday xuduuda u dhaxaysa Tigray iyo Eritrea, wuu istaagay. Dawlada Eritrea waxay dagaal aan geed loogu soo gaban ku qaaday dhulka Somalida Ogadeeniya, waxayna u gaysataa dadweynaha Somalida Ogadeeniya dhibaatooyin xoog leh oo naf iyo maalba leh.
Xukuumada Itobiya way ka warhaysaa in Eritrea ay si toos ah iyo si dadbanba ugu jirto dagaalka ka socda dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxaana waajib ku ah Itobiya in ay difaacdo dadwenaha Somalida Ogadeeniya ee ay maamusho, kana difaacdo xukuumada Eritrea. Itobiya waxaa la gudboon ugu yaraan in ay samayso waxa ay Eritrea samaynayso ama ay weerarto Eritrea iyada oo ka difaacaysa gabalka Ogaden. Somalida Ogadeeniya shalay waxay difaacday Tigray iyaga oo naf iyo maalba huray, waana nasiib daroweyn in muddo badan ay Eritrea dhibaataynaso dhulka Ogaden.
Hadii, ayna Itobiya talaabo muuqata ka qaadin xukuumada Eritrea, lagama yaabana in nabad galiyo loo helo dhulka Somalida Ogadeeniya, dadaal kasta oo la sameeyo. Xalka kaliya ee nabad galiyo lagu heli karana waa iyada oo ay xukuumada dhexe ka qaado talaabo muuqata dawlada Eritrea.
Hadii ayna arintaas difaaca ahi dhicin xukuumada Itobiya way dayacday dadweynaha degan dhulka Somalida Ogadeeniya.
Ciidan kasta oo ay gayso DDS, waxaa uu noqon doonaa hal bacaad lagu lisay, ciidankaas laftigiisa ayeyna suurto gal tahay in uu dhibaato u gaysto dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waana suurto gal in ay duufsato Eritrea.
Sidaasina waxaa qaba wax garadka iyo aqoon yahanka ku nool gudaha Somalida Ogadeeniya oo iyagu khadyaan ka taagan dagaalka aan dhamaadka lahayn ee iyaga uun waxyeeleeya.